Covid-19 ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတကျနရေငျး ကှယျလှနျသှားရှာတဲ့ နန်ဒာလှိုငျ ညီမရဲ့ အမြိုးသား – မြန်မာသတင်းစုံ
Covid-19 ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတကျနရေငျး ကှယျလှနျသှားရှာတဲ့ နန်ဒာလှိုငျ ညီမရဲ့ အမြိုးသား
Posted on September 19, 2020 Author admin	Comments Off on Covid-19 ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတကျနရေငျး ကှယျလှနျသှားရှာတဲ့ နန်ဒာလှိုငျ ညီမရဲ့ အမြိုးသား
ပရိသတျကွီးရေ.. မွနျမာနိုငျငံမှာ မတျလအတှငျးက စတငျဖွဈပှားခဲ့တဲ့ Covid-19 ရောဂါက တဈနတေ့ဈခွား ကူးစကျသူတှမြေားပွားလာခဲ့တာ အခုဆိုရငျ လူနာပေါငျး (၄၆၂၁) ဦးတောငျရှိ ခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ သဆေုံးသူအနနေဲ့လညျး (၇၅) ယောကျတောငျရှိခဲ့ပွီဖွဈပွီး တဈနတေ့ဈခွား စိုးရိမျစရာကောငျးလာခဲ့တာကို တှရေ့ပါတယျ။
နိုငျငံကြျော သရုပျဆောငျ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ ညီမအရငျးဖွဈသူ ဒျေါနှေးနှေးလှိုငျနဲ့ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးငှေ ဇျောတို့ကလညျး Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစကျခံခဲ့ရတာကွောငျ့ ဆေးရုံတကျပွီး ဆေးကုသမှုခံယူ နေ ခဲ့ရတာ ရကျအနညျးငယျရှိခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ စိတျမကောငျးဝမျးနညျးစရာကောငျးတဲ့ သတငျး ကတော့ ဒီကနေ့ စကျတငျဘာလ (၁၉) ရကျနေ့ နံနကျပိုငျးမှာပဲ နန်ဒာလှိုငျရဲ့ ညီမရဲ့ အမြိုးသား ဦး ငှဇေျောက ဘဝတဈပါးသို့ ကူးပွောငျးသှားခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နန်ဒာလှိုငျကလညျး သူ့ရဲ့ မတျဖွဈသူ ကှယျလှနျမှုအတှကျ သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ အတ ညျပွုပေးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ Cele Connections မှလညျး နန်ဒာလှိုငျတို့ မိသားစုနဲ့ ထပျတူဝမျး န ညျးရကွောငျး ညှိုးငယျစှာနဲ့ ပွောလိုကျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆု တောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
Covid-19 ရောဂါနဲ့ ဆေးရုံတက်နေရင်း ကွယ်လွန်သွားရှာတဲ့ နန္ဒာလှိုင် ညီမရဲ့ အ မျိုးသား
ပရိသတ်ကြီးရေ.. မြန်မာနိုင်ငံမှာ မတ်လအတွင်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Covid-19 ရော ဂါက တစ်နေ့တစ်ခြား ကူးစက်သူတွေများပြားလာခဲ့တာ အခုဆိုရင် လူနာပေါင်း (၄၆၂၁) ဦးတောင်ရှိ ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သေဆုံးသူအနေနဲ့လည်း (၇၅) ယောက်ေ တာ င်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တစ်ခြား စိုးရိမ်စရာကောင်းလာခဲ့တာကို တွေ့ရပါ တယ်။
နိုင်ငံကျော် သရုပ်ဆောင် နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ညီမအရင်းဖြစ်သူ ဒေါ်နွေးနွေးလှိုင်နဲ့ ခင်ပွ န်းဖြစ်သူ ဦးငွေ ဇော်တို့ကလည်း Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်ခံခဲ့ ရတာေြ ကာ င့် ဆေးရုံတက်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူ နေ ခဲ့ရတာ ရက်အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ သတင်း ကတော့ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှာပဲ နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ညီမရဲ့ အမျိုးသား ဦး ငွေဇော်က ဘဝတစ်ပါး သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နန္ဒာလှိုင်ကလည်း သူ့ရဲ့ မတ်ဖြစ်သူ ကွယ်လွန်မှုအတွက် သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကေ န အတ ည်ပြုပေးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Cele Connections မှလည်း နန္ဒာလှိုင်တို့ မိသားစုနဲ့ ထပ်တူဝမ်း န ည်းရကြောင်း ညှိုးငယ်စွာနဲ့ ပြောလိုက်ပါတယ်ေ ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှ င်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆု တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ပွတျစဲ လမျးခှဲ လိုကျကွပွီလို့ ဝဖေနျ မှတျခကျြ ပေးခံနရေတဲ့ ရဲရငျ့အောငျနဲ့ ဧငွိမျးဖွူတို့ စုံတှဲ
ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင် သဘောကျ ရတဲ့ အနုပညာရှင် စုံတွဲတွေထဲက သူတို့ စုံတွဲလေး တစ်တွဲ အပါအဝင် ဖြစ်ပြီး နားလည်မှု ရှိရှိနဲ့လက်တွဲ ခဲ့ကြပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ အဆင် မပြေ ဖြစ်ကာလမ်းခွဲ လိုက်ကြပြီလားလို့ မှတ်ချက်တွေ ပေးနေကြတာပါ။ သူမတို့ စုံတွဲကို ချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ အရမ်းကို စိုးရိမ်နေ ကြတာပါ။ လမ်းခွဲလိုက် ကြပြီလားလို့ မှတ်ချက် ပေးခံ နေရတဲ့ အကြောင်း အရင်း ကတော့ ” မိန်းကလေးတွေက အသည်းကွဲနေရင်တောင် အလှတော့ မပျက် မခံနိုင်ကြဘူး” ဆိုတဲ့ စာလေးကို အေးငြိမ်းဖြူက တင်အပြီးမှာ “မျက်ရည် ကျတတ်လား? လို့ နင်ငါ့ကို မမေးနဲ့ ငါ တန်ဖိုး ထားတဲ့ […]
မင်းသမီး နန္ဒာလှိုင်အိမ် locked down.
တပ်မတော် Q center များမှာ Q ဝင်လိုလျှင်..